Ọrụ a na-enweta na Dubai dị na Dubai na Abu Dhabi
Tinye azụmahịa gị na Dubai
Ọrụ dị na Dubai dị na Dubai na Abu Dhabi - Ọrụ dị na Dubai na Abu Dhabi!
Mwepụta ọrụ na Dubai - United Arab Emirates
Ọrụ maka Pakistani na UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at December 10, 2017
Ọrụ na Dubai Recruitment - Anyị na-now recruiting
Ọrụ na Dubai mbanye maka ndị ọgbọ. Buru nke a n'uche, otu anyị, enyere ndị ọrụ ọhụrụ. Karịsịa onye nwere ezigbo ahụmịhe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na mba ofesi. Na-enwe ọtụtụ afọ nke ahụmịhe. Ndị otu anyị na - ewe n'ọrụ na - ele anya inyere gị aka. N'akụkụ na-adịghị mma, ndị ọrụ na mba ofesi. Onye nwere ike enweghi ezigbo ahụmịhe. Ka nwere ike chọta ọrụ dịka ọmụmaatụ na ngalaba nche. Mana ọ ga-ewe oge dị ukwuu karị.
Anyị na-enye gị ọrụ na Dubai!
Pịa na foto iji bulite CV
Ọrụ dị na Dubai na Abu Dhabi!
Ọrụ dị na Dubai - Dubai City Companylọ ọrụ, Anyị bụ ugbu a na-ewe n'ọrụ gaa Dubai !. N'eziokwu, ụlọ ọrụ anyị nwere ọrụ dị na tubai na Abu Dhabi. Tinye maka ọrụ ọhụrụ na CV gị emelitere taa !. Dubai City na Abu Dhabi Na-ekwu okwu n'ozuzu na-eso afọ afọ nke toro na ọtụtụ ọrụ ọrụ. Ọnọdụ ndị ahụ, Ọga Emirates gara n'ihu ya na ọnụahịa mmanụ. Daysbọchị ndị a, mpaghara GCC na-emesịa ịmalite ịchịkwa ezigbo ọrụ maka ndị ọgbọ ma malite mmemme pụrụ iche maka ndị ala ọzọ.
Na nyocha nke ikpeazụ, ndị otu anyị Nịm ọrụ achọ mmemme mmegide maka ịrị elu ohere maka ọrụ na ohere ọrụ maka gị. N'iburu isi ihe ndị a, anyị nwere usoro dị oke arụ ọrụ ọhụrụ maka onye ọ bụla chọrọ ọrụ na 2018.
Ruo ugbu a, Citylọ ọrụ Dubai City na-enyocha nyocha banyere ndị ọrụ 950 gafee United Arab Emirates. Yabụ na n ’ihu iru ala, anyị ekepụtala ụfọdụ atụmatụ maka ọrụ na Dubai maka India.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ mepụtara mgbasawanye afọ a maka Dubai, ya na ụlọ ọrụ ole na ole dị ịtụnanya na-eme atụmatụ ịbelata ọrụ.
Ịrụ ọrụ n'ime mmanụ & gas ndi ka eto eto na Sharjah Dubai, ma na nwayọọ nwayọọ na Abu Dhabi.
N'ime ụlọ ọrụ 35,000 dị na Dubai ịchụ ụgwọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọrụ.
Anyị na-enye ọrụ na Dubai Nchịkọta maka ndị ọgbọ na ụlọ ọrụ Dubai City.
Ọrụ na Dubai Recruitment - Dubai City Company
Ọrụ na Dubai - nduzi zuru oke maka inweta ọrụ
Ọrụ na Dubai ọ bụ banyere ọrụ nrọ n'aka nke ọzọ ị nwere ike inweta ya.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị nweta ọhụrụ ohere ọrụ na United Arab Emirates. Dubai City Company nwere ozi ọma maka gị. Enwere ọtụtụ nnukwu ọrụ na obodo ha dịkwa iche na. Agbanyeghị, n'otu ihe, ọnọdụ ọrụ na oge ọrụ nwere ike ịdị dị nnọọ iche na ala nna gị. Ikwupụta aka usoro nyocha oru na Dubai lee anya n'isiokwu anyị, anyị edepụtara ihe niile ị chọrọ ịma esi enweta ọrụ na Dubai.
Akwa akuko maka ohuru ndị na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Isi ihe ọzọ maka onye ọ bụla na-achụ nta achụmnta ego nke nwere ezi nkà nwere ike nweta ezigbo ọrụ na UAE. Otu ihe, Ndi mmadu batara na Dubai ma meghee maka ọrụ ọrụ ọhụụ. Ikwesiri ịmara ọrụ ị na-achọ ịbanye na United Arab Emirates. N'okpuru otu anyị na-akọwapụta ndụmọdụ ole na ole ebe ị nwere ike ịchọta ebe kacha mma na Middle East. Ebe nrụọrụ weebụ ndị a na - enyere gị aka iche echiche dị iche iche banyere ọnọdụ dị iche iche na Dubai City na Abu Dhabi. Ọrụ na Dubai Nchịkọtaghachi bụ isi gị na ihe ịga nke ọma na Middle East.
Ugbu a, anyị na-anakọta!
Nweta nlele ngwa ngwa maka ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ ụzọ ọrụ na Middle East na ngalaba ọrụ. Anyị na-achọkwa inye aka na-enye aka ozi bara uru maka onye ọ bụla na-achọ ọrụ. N'ozuzu, ozi anyị bụ igosi gị nke ụlọ ọrụ dị ihe kacha mma maka ịbanye na UAE.
N'akụkụ na-adịghị mma, enwere otutu ebe nrụọrụ ndi ama ama. Offọdụ n'ime ha na-ewu ewu, n'ihi ya ị ga-ahụkarị onwe gị megide ọtụtụ narị ndị mmeri na ị ga-anọ na nnukwu ọdụ ụgbọelu. Ma n'ọnọdụ ndị a, adala mbà ichu nta oru na WhatsApp n'ihi na unu niile na-achọ otu ihe ụzọ ọrụ na Dubai City.
Nzube anyị bụ igosi gị ebe ị ga-ebuteghachi na chọta oru kachasị ụgwọ na Dubai. Ọrụ na Dubai ịmalite na Middle East.
Top Job Portal Site ke Dubai N'ihi UAE na Ọrụ na Dubai?
Ụlọ ọrụ legit na nyocha m
DUBAI isi obodo
# No.1 Ụlọ ọrụ kacha mma - Top: Job Site maka Ọrụ nlekota na nlekota oru na UAE.
Dubai City Company - Ọrụ na Dubai - Ụlọ Ọrụ Nme Ihe na No.1 Onye Nlekọta Anya UAE. Anyị na-ede banyere ihe na-eme na UAE.
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Dubai City bụ onye isi egwu na ntanetị ahịa ahịa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị isi ọrụ anyị nọ ebe a maka inyere ndị ọrụ ọzọ aka na Dubai. Na njedebe ikpeazụ, ịnwere ike ịnweta ọrụ dị mkpa karịa ndị na-akpọ ọrụ dịka onye nchụ nta n'ọrụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ anyị na ndị na-achọ ọrụ achụmnta ego na-abịa site na India, Pakistan, ka Saudi Arabia. N’aka nke ozo, icho oru na Dubai site n'ahịa ọrụ esenidụt ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na obodo n'ihi na ndị ọrụ mbanye, ọrụ na-arụ ọrụ gburugburu na Middle East.
Dubai City Company - Anyị bụ website Legit maka ọrụ na Dubai
Site n'otu aka ahụ, ebe nrụọrụ weebụ anyị na-enye otu nnukwu ụgwọ ọrụ na Dubai. Ọzọkwa, anyị na-eji teknụzụ dị elu iji nyere gị aka webata nrọ ọrụ. United Arab Emirates bụ otu n'ime mba kachasị amasị na nke a na-achọsi ike maka ịchụ nta zuru ụwa ọnụ na ndị na-achọ ọrụ Europe. Dubai City bụ ebe kachasị mma na ọtụtụ n'ime ha mejuputara ahụmịhe kachasị ọhụrụ iji nweta ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ihe owuwu.
Maka nke a, ìgwè anyị bụ otu n'ime kachasị mma ịtọ ndị isi. Yana ọrụ nbanye na mba niile Ndị otu anyị na-enye ọtụtụ ọrụ ohere karịa maka mba GCC niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na inwere ogo mmụta n’ọhịa ahịa ị nwere ike bụrụ ezigbo onye ndoro anya nke anyị. N'ihi ọrụ ụlọ ọrụ anyị, anyị na India, Philippines, Saudi, Qatar, na-arụkọ ọrụ, Ndị ọrụ achụmnta ego Pakistan. Ya mere, ya mere onye ọ bụla na-achọ ọrụ na-achọ ọrụ nrọ ha na Dubai. Anyị na-enye ọrụ kachasị elu na UAE. Ọrụ na Dubai A ga-enyocha ụlọ ọrụ Dubai City Company.
Ka ị ghara imebi oge gị ị kwesịrị ị bulite Mmepụta gị na anwale zuru oke maka mmemme mgbanwe. Citylọ ọrụ Dubai City na-enyekwa ndị ọrụ ịtụnanya dị ịtụnanya na mgbasa ozi mmekọrịta. Ma ihe karia. Anyị na-akwụ ụgwọ na Mumbai na Mba.
Ọrụ na Dubai - Dubai City Company
Anyị bụ ezigbo enyemaka nyocha ọrụ na Dubai City!
Ndị ọzọ kacha elu na ụlọ ọrụ 5 - Maka ịchọta ọrụ ohere na Dubai City
Ezi Ike na Ndụ - Citylọ Ọrụ Dubai City
Bayt - Ibu ndi oru na UAE
Onye ọ bụla na-ekwu banyere ya kedu otu esi enweta ọrụ na Dubai?. Ihe mbụ ị ga-echeta na Bayt bụ otu n'ime saịtị kachasị mma maka ọrụ Gulf Mba ọrụ ohere. Ikwupụta aka saịtị a gụnyere Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Kuwait, Qatar, na Bahrain. Ma ị nwere ike ịhọrọ site na obodo ndị ọzọ. Bayt na-akpọsa ngwa ahịa ọtụtụ ọrụ na-enye kwa ụbọchị.
Ihe kachasị ike ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị siri ike ndi oru nyocha oru. N’ikwu ya, ịkwesịrị ị na-eziga ọrụ ọ ga-ebido kwa ụtụtụ ndị ọrụ ọhụrụ. Mee elu mee ala, should ga-eme nke ahụ kwa mgbede na-enwe olileanya na ị ga-ahụ ọmarịcha ọnọdụ gị. Nke a Portal na-ukwuu gosiri maka ọrụ na Dubai maka Indian.
Ọtụtụ n’ime ndị na-achọ ọrụ hụrụ UAE n'anya dịka nke ahụ nwere ike ịgbanwe ndụ gị. N'ihi nke a Ụlọ ọrụ Dubai na UAE biputere ọrụ dị iche iche maka ọrụ ọhụụ ehihie na abalị. Ya mere, ezigbo ohere ọrụ ha dabere na UAE. N'akụkụ na-adịghị mma n'ihi na ha buru ibu, ị ga-enwe ike chọta ohere gafee Arabia. North Africa na ọbụna Pakistan na Sri Lanka. Ma ụdị nke a ohere inweta oru adighi nfe inweta.
Gulftalent - Otu n'ime ọrụ kacha mma maka ndị ọpụpụ
Site na ọrụ ọrụ a, ihe ijuanya na ị nwere ike ịmaliteghachi ọrụ gị. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ngwa ngwa kere profaịlụ ọkachamara ga - enyere gị aka iji onye nrụpụta GulfTalent CV. Maka nke a, jiri CV na profaịlụ ha haziri ahazi maka oru gi na acho ebe obula. Hụ kwa ụfọdụ ihe atụ CV na weebụsaịtị ha.
Gulf-talent bụ ụlọ ọrụ Dubai na-arụ ọrụ site na portal. Nke a Ụlọ ọrụ Dubai depụtara nnukwu ụlọ ọrụ 4,000 dị mma site na mba Gulf. N'ihi ya ndị na-achụ nta ego na ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ eji ọrụ ha achọta talent ọhụrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, e nwere ụfọdụ nnukwu ụgwọ ọrụ n'ebe ahụ, gụnyere Daman, ADCB, na Etisalat.
a Dubai Hiring Company na-enye ọrụ ohere gafere n'ofe Osimiri Gulf. Ọ bụ ezie na ị ga-achọta ihe ndị ọzọ ohere ọrụ na Gulf ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ naanị na UAE. N'iburu nke a n'uche, enwere ndị isi ọrụ ole ole ị nwere ike inweta ma kwụsị nro maka Dubai.
MonsterGulf - International ọrụ portal ke GCC Mba
Monstergulf na-elekọta alaka ụlọ ọrụ nke mba ụwa. Monster bụ ezigbo ọrụ ọrụ enyi. Ebe ị bụ onye na-achọ ọrụ ọhụrụ, ọrụ dị na ọtụtụ ndị na-emepụta ngwá ọrụ. N’aka ozo, nnukwute igwe na-enyere ndi nile bi n’ime mba aka iwu ulo na kinglọ akụ maka ụlọ. Nke ahụ bụ ikwu na ọrụ a na I nwere ike ịchọ ọrụ n'ọrụ weebụ, mpaghara ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Saịtị ọrụ a na-enye ohere ngwa ọrụ ọhụrụ intanet iji bulite CV na nchekwa data ma na-enye ndụmọdụ na ndụmọdụ na otú e si etinye maka ọrụ na Dubai.
Ụlọ ụlọ - Ọrụ nchịkọta ọrụ na Dubai City
Ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ na Middle East, ma, n'ezie, na-anata maka ụdị ọrụ dịgasị iche iche n'ime UAE. Site n'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ a malitere ịrụ ọrụ na UAE kemgbe 2004. Ụlọ ụlọ nwere ọnọdụ dị maka ndị na-agafe agafe na-achọ n'ihi ọrụ mbụ ha ma ọ bụ ọrụ ha na Dubai. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ọrụ ha bụ maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ karịa ịgụnye obere ọnọdụ dị ala. Ha na-ahụ maka ọrụ na ndị isi mbanye maka ọrụ dị mma na ọrụ injinịa.
Michael Page - Ọrụ na saịtị Dubai na UAE
N'otu oge ahụ, ụlọ ahịa Michael Page bụ zuru ụwa ọnụ ọkachamara nchịkọta ọkachamara. N’ezie, ụlọ ọrụ a guzosiri ike n’ahịa Dubai City. N’ihi ya, ha nwere ọfịs n’ụwa niile. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu Michael Page gụnyere obodo na obodo kachasị mma n'ihi na n'ọrụ mbanye. Dị ka Japan na Ireland na Australia. Na mgbakwunye, ha nwere ike itinye gị maka maka ọnọdụ dị iche iche site na ọrụ ntinye rue ọkwa onye isi na Emirates Airlines.
Ọrụ na Dubai - Bụrụ iche na ịchọta ọrụ ọhụrụ!
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na UAE, ọ bụ ihe kacha mma maka onye ọ bụla ilebara anya na mpaghara mpaghara ha. Nke gunyere oru ego, uzo oru etiti n’azu ahia na n’ime ahia. Ghara ikwuputa n'ezie ọrụaka ọnọdụ na iga, n'ichepụta na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na ụsọ mmiri.
Ugbu a, anyị na-anata ndị ụlọ ọrụ gọọmenti
Ọrụ na Dubai nchịkọta maka ndị ọhụụ
Ụlọ ọrụ Gọọmentị dị na UAE dị mkpa ka ịlele
Companieslọ ọrụ gọọmentị hiwere ụlọ ọrụ dị mma na Abu Dhabi na Dubai City afọ iri gara aga. Ọzọkwa, ha nwere gbasaa na GCC niile na-azụ ahịa karịa ebe ahụ. Ọtụtụ n'ime ọrụ akpọsaara dabere n'isi obodo ndị dị ka Doha, Dubai, na Riyadh. Ya mere, ha nwere nnukwu ego na ụlọ ọrụ ego na ha kachasị mkpa na UAE. Ya mere, otu ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ọkachamara maka ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọkachamara n’ihe banyere injin na mmanụ. Ọzọkwa, ihe owuwu, injinịa, ụlọ akụ, IT ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Ị kwesịrị bido ichọ oru n’ebe ahu. Companieslọ ọrụ ndị a dị ịtụnanya kwesịrị ịnwale.
Ngosipụta 2020 Career na Dubai
Ngosipụta 2020 n 'ụzọ nke UAE na-eto eto. Ahịa nlekọta na mmepe na Dubai City. Iji kwu eziokwu, ị kwesịrị ịgagharị Middle East ahịa na Ngosipụta 2020 bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma isi mee ya. N'aka nke ozo, inwere ike buru akuku nke Expo 2020 Dubai enwere ike ịhụ ọrụ ọrụ oke ọrụ na ohere afọ ofufo.
Ọrụ dị na Expo dị maka ndi mmadu di iche iche na ndi mara amara. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ isonye na otu Expo 2020 HR ị kwesịrị ịbụ onye ume. siri ezigbo ike maka ọnọdụ ọhụrụ na mmụọ nsọ banyere mmadụ na otu ọhụrụ gị.
Ọrụ Ụlọ Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ
E nwere ihe karịrị 1,000 Ministry of Interior Ọrụ na Dubai maka 2018. Ị bụ onye na-achọ ọrụ nbanye ?. Ma ọ bụ na-achọ ọrụ ọrụ ogo dị elu ?. Ozi nke ime obodo bụ otu n'ime ihe kacha mma. N'ozuzu, enwere ọnọdụ ọrụ 1,200 maka ịrụ ọrụ dị iche iche n'ime Dubai City. Ọtụtụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ ngalaba oru. Tinye ebe a ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ maka Ọrụ gọọmenti na United Arab Emirates. Bulite gị malitegharịa: Tinye Resume gị n’ọrụ ndị a. Ọzọkwa Choputa ihe ndi ozo banyere oge oge na Dubai City.
Ọchịchị Gọọmenti Na-ahụ Maka Nchịkwa Mmadụ na Dubai na-achọ gị
Ọchịchị Dubai maka Ọrụ Nlekọta Ndị Ọrụ Maka Ọha maka ezigbo onye chọrọ. Na nke a, ebumnuche nke ohere a ka ndị expats bụrụkwa ezigbo mmadụ nke ọma na Dubai. Ọchịchị dị tupu ịhọrọ isonyere ezinụlọ ya azụmahịa zọ kachasị mma iji sonyere ha bụ ịmara ebumnuche ndị bụ isi site na ya Ụkpụrụ nke gọọmentị Dubai mere. Onwere ole na ole I kwesiri imata. Nnọkọ Mmekọrịta, Nghọta, na Obi .tọ".
Ọrụ ndị metụtara gọọmentị ịkwesịrị ịkụcha kacha nta. Dịka ọmụmaatụ, ịkwesịrị ịnwe Ọzụzụ MBA maka ohere ohere ọkachamara.
Ọrụ na TECOM Group
Òtù TECOM na-enye ọtụtụ ohere ọrụ na Dubai City, na ụlọ ọrụ a bụ nnukwu nnukwu ego. Maka ebumnuche ndị ọhụrụ sitere na ndị ruru eru ka ha gụchaa akwụkwọ. Otu Teko na - eji ego eme ihe bara uru na ndi na acho oru n’iile. Nwa akwukwo nke nwere ntozu oke na aka ya enwere ike ịnweta ha na ọrụ.
Ndị otu Tecom na-eji eme ihe nwere ọtụtụ ọdịbendị ọdịnala si India, US, Canada, Australia na Middle East. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka iche echiche banyere omenala Dubai na ọrụ. N'ime afọ 20 gara aga, ụlọ ọrụ ahụ na-enye asọmpi uru nye onye oru nta ọ bụla. N’ege ntị siri ike n’ahịa ụwa na-etolite na Dubai. Ụlọ ọrụ ahụ na-eme itinye ego dị oke mkpa na mba GCC ya na ụlọ ọrụ dị ịtụnanya, ị ga-abụ ya manager ọ bụrụ na ị bụ ezigbo mmadụ.
Maka nke a, TECOM Group na 2018-2019 emebewo usoro itinye ego ogologo oge. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọtụtụ ọnọdụ dị n'etiti ụlọ ọrụ dị njikere ka emejuputa ha. Nke a maara nke ọma Obodo Dubai na-arụ ọrụ dị iche iche na expats na ọkwa ọ bụla na Dubai. Na ichikota, ikwesiri izipu vitae gi nke emelitere iji chee maka mmeghe Tecom Group, biko Gaa na Dubai na-arụ ọrụ iji bulite nkọwa.
Ọrụ na Dubai Recruitment na Dubai City Company. Ụlọ ọrụ kasị mma maka ndị na-achọ ọrụ !.
Ọrụ na Dubai na Dubai Holding
N'inye ihe ndị a, tinye aka na ya Dubai Holding ma nweta "Gov" Job na Dubai. Ịkwesịrị ịdee resote gị na Internet gaa Dubai City Holding. Ruo ugbu a, ọ bụ agbanyeghị ụlọ ọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ na mba Gulf. N'oge a, ịnwere ike ịtọlite ​​ọkwa maka ụlọ ọrụ ha. N’ikpeazụ, nweta arịrịọ ọrụ na ajụjụ maka ndị na-ahụ maka ọrụ Dubai. Iru nke ndị gọọmentị na-ewe ndị ọrụ gọọmentị na-arụ ọrụ na Dubai. Can nwere ike bulite mmalite gị na peeji nke gọọmentị UAE.
Welcome to Dubai Holding Group - Dubai Holding Ọrụ na Dubai Recruitment na Dubai City Company.
Ị nwere ike ugbu a tinye maka ọrụ na Dubai Holding. Ndị nlekọta nwere nnukwu ọrụ na ngalaba nke ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'ógbè azụmahịa, ile ọbịa, njem nleta, ezigbo ala & na kọntaktị na arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-akụzi ihe.
Ijidere ebe Dubai kemgbe 2009 rụrụ ọrụ dị mkpa na usoro ọrụ na akụ na ụba ọrụ dịgasị iche iche n'ofe ọtụtụ ọrụ. Na mkpokọta, ha ụlọ ọrụ na-anọchite anya itinye aka n'ofe ụlọ ọrụ 12, na-akwado nkwado na uto nke nkwado, akụ na ụba na-edu ndú na mmekorita ya na United Arab Emirates Vision for 2021.
Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwukwo nke uwa ma choo oru nke na-enye ohere iji rụọ ọrụ na-eduga na mba ụwa, ọzụzụ zuru ezu na mmepe Dubai Holding ọrụ ahịa maka gị. Bido ọrụ ọhụrụ gị ma bụrụ akụkụ nke a ngwa-ngwa na-agbagha ma na-agbagha na obodo Dubai. Zipu Resume gị Dubai Holding.
Anyị na-ewe ndị ọrụ maka Dubai ugbu a!
Otu ihe ọzọ ị ga-echeta Ọ na-enwe oke mpụ ndị dị ala. Yabụ, na eburu nke a n'uche, You Chọrọ ịchọta Job na Dubai? n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịbụ eziokwu Anyị nwere ike inyere gị aka ọ bụrụgodị na ị bụ onye na-eto eto. To ga-amalite ọrụ ọhụrụ na UAE!
Bulite Na-amalite gaa Obodo Na-arịwanye Elu Na Ụwa! - Dubai City
Kuwait - Kedu uru
Etu ị ga-esi gbazite ụgbọ ala mba ọzọ (na ndị ọzọ). Ntuziaka maka Expats.
Kedu akwụkwọ maka Kuwait? Visa na Kuwait Akwụkwọ ikike inye ụmụ amaala Poland ka ha kwaga n'ókèala Kuwait bụ visa, enwere ike inweta n'ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya Kuwait na Warsaw. Wayzọ ọzọ iji nweta akwụkwọ (maka oge na-erughi ọnwa 3) bụ ịzụta ya na ọdụ ụgbọ elu dị na Kuwait, na-enweghị usoro ọzọ. Ndị jidere visa njem nleta maka Kuwait nwere ike bụrụ naanị ndị na-ejide akwụkwọ ikike paspọtụ ọ dịkarịa ala ọnwa 6 ọnwa site na ụbọchị ọpụpụ. Thegwọ ndị bịara njem nleta bụ 3 KWD, ọnụ ahịa nke na-agbanwe agbanwe na gburugburu 35-40 PLN. Kedu ego ego Kuwait ga-ewere? KWD Kuwaiti Dinar! Echiche osimiri n'elu osimiri nke Kuwaiti, nke na-agbachapụ anyanwụ, nke mmiri nke Ọwara Oké Osimiri Pasia gbara gburugburu, nke e ji ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri chọọ, ga-echeta ndị ga-enwe mmiri ahụ ogologo oge. Ohere dị iji iji anya ha na-ele ihe anya. Na mgbakwunye, njem gaa Kuwait bụ nnukwu ohere iji hụ Sayensị Sayensị, nnukwu mmiri mmiri kachasị ukwuu na Middle East, nke ụdị anụ ndị dị n'oké osimiri bi na mpaghara Ọwara Arab, gụnyere shark. Iji were anya gị niile kirie ebe ndị a niile, tupu ị pụọ, i kwesịrị icheta azịza ajụjụ a "Olee ụdị ego Kuwait bụ?" - Akwụkwọ Kuwaiti ga-eme ka ndị njem nwee njem udo na nke nchekwa.
Kedu ụdị ego m kwesịrị ịkpọta Kuwait?
Debanye aha na Free na Bayt!
Chọta Ọrụ Ka Mma!